स्वार्थका कारण ठूला आयोजना बन्न सकिरहेका छैनन् | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता स्वार्थका कारण ठूला आयोजना बन्न सकिरहेका छैनन्
on: April 09, 2018 अन्तरवार्ता
स्वार्थका कारण ठूला आयोजना बन्न सकिरहेका छैनन्
सप्तरी जिल्लामा जन्मिएर एसएलसीसम्मको अध्ययन त्यहीँ गरेका डा. अरविन्दकुमार मिश्रले भारतको रुडकी विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तरमा उत्कृष्ट भए । नेपाल फर्किएर पुल्चोक इञ्जिनीयरिङ क्याम्पसको इलेक्ट्रिकल इञ्जिनीयरिङको स्नातकोत्तर तहको पाठ्यक्रम तयार पारे । शिक्षणसँगै आफ्नो उच्चशिक्षा पनि अघि बढाएका उनले स्पेनबाट पोष्ट डक्टरेट गरे । नेपाल नै फर्केर उनले पुनः प्राध्यापन करीअर अघि बढाए । केही समय अघिसम्म उनी राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य थिए । प्रस्तुत छ, ऊर्जाक्षेत्रको नीति तथा योजनाबारे विशेष दख्खल राख्ने डा. मिश्रसँग आर्थिक अभियानका दुर्गा लामिछानेले गरेको कुराकानीको सार :
विद्युत् विकासको शुरुआती अवस्था र वर्तमानको विद्युत् व्यवस्थापनमा के फरक देख्नुहुन्छ ?
अहिलेको तुलनामा त्यतिबेला निकै दूरदर्शिता र व्यवस्थापकीय सचेतता भएको पाउँछु । सन् १९८२ मा जलाशययुक्त कुलेखानी १ (६० मेवा) आउँँदा नदीप्रवाही (आरओआर) ५० मेवाभन्दा कम थिए । त्यसपछि पनि आरओआरलाई भन्दा दैनिक विद्युत् उच्च माग भएका बेला सञ्चालन गर्ने (पीआरओआर) आयोजना बनाउन बढी जोड दिइयो । समग्र विद्युत् उत्पादन नै कम भइरहेको त्यो बेलामा पनि माग र पूर्तिको अवस्थालाई निकै विचारपूर्वक सन्तुलन मिलाइएको थियो । २०५०/५२ तिर पश्चिम सेती, अरुण जस्ता आयोजना अघि बढाउने प्रयास भए । तर, प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उप–प्राध्यापकमा स्थायी हुन परीक्षा दिँदा कालीगण्डकी ए जलविद्युत् आयोजना (१४४ मेवा) सञ्चालनमा आएपछि विद्युत् खेर जानेछ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने होला भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो । तर, अहिलेको हाम्रो अवस्था हामीलाई थाहै छ ।
यसबीचमा मूलतः निजीक्षेत्रबाट जुन परिमाणमा आरओआर आए, त्यसलाई सन्तुलन गर्न जलाशययुक्त र पीआरओआर आयोजनाहरू विकास हुन सकेको छैन, जसले गर्दा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ ।
यसो हुनुमा नीति निर्माण तहमा दूरदर्शिता नभएर हो कि, कार्यगत तत्परता नभएर, के कारण देख्नुहुन्छ ?
दूरदर्शिता त छ, नत्र भने अरुण, पश्चिम सेतीको चर्चा त्यति बेलै कसरी उठ्थ्यो ? तर, नीतिगत तहमा यो गरिएन भने १० वर्षपछि यो समस्या आउँछ भन्ने गम्भीरता नभएर काम गर्ने सवालमा हेलचेक्र्याइँ भएकाले हो । जबसम्म मान्छेलाई पुगिरहेको हुन्छ, तबसम्म तत्परता आउँदैन । अहिले लोडशेडिङ हटेकै सवालमा भन्दा, मलाई यो हटाउनु नै छ भन्ने भएर न हटेको हो । आयात गरेर हुन्छ कि पीआरओआर चलाएर हुन्छ कि, जसरी नि हट्न त हट्यो । तर, पहिले नै पश्चिम सेतीहरू ढिलो हुन थाल्दा, पछि समस्या पर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन हामी चुकेको हो ।
हिजोको दिन पुगेकाले तत्परता नआएको भन्नुभयो, तर अझै पनि त्यो तत्परता देखिन्न नि ?
ऊर्जाक्षेत्र मात्रै होइन, नेपालमा धेरै कुरा चलखेलबाट हुन्छन् भन्ने त हामीले सुनिरहेकै हो । जुन परियोजना जति ठूला हुन्छन्, त्यसमा हस्तक्षेप र स्वार्थ पनि त्यति नै धेरै हुने रहेछन् । सानोमा यी दुवै कुरा सानै हुने हुँदा निकास अलिक छिट्टै निस्किने रहेछ । ठूलोमा स्वार्थ पनि ठूलै हुने । गरेको कामको जस पनि मैले लिऊँ र फाइदा पनि मैले नै उठाऊँ, मैले पाइनँ भने अर्कोलाई पनि गर्न दिन्न भन्ने सोचले समस्या आएको हो ।
यसको मतलव ऊर्जाक्षेत्रमा ठूलो भ्रष्टाचार छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
विभिन्न समयमा भएका गतिविधिले स्वार्थ छ भन्ने देखिन्छ । पैसाकै मात्र पनि नहुन सक्छ । तर, देशी विदेशी दुवैको स्वार्थको मारमा हामी परिरहेका छौं ।
यस्तो स्थिति हो भने यस्ता स्वार्थबाट सुरक्षित रहेर ऊर्जाको विकास गर्न सकिने अवस्थाको सम्भावना कहीँ छ ?
छ । अहिलेसम्म जे गर्‍यौं, त्यसको परिणाम भोगिरहेका छौं । यसबाट चेत आउनुपर्‍यो । अलिअलि चेत आएको पनि हो कि भन्ने लाग्छ । म योजना आयोगमा हुँदा प्राधिकरण तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा नियमित सम्पर्क भइरहन्थ्यो । त्यो बेला उहाँहरू हामीले धेरै कुरिसक्यौं, अब कुर्न सक्दैनौं भन्ने विचार व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो ।
के त्यो चेत अझै जीवित देख्नुहुन्छ ?
हुनुपर्ने छट्पटाहट आएको चाहिँ थियो । तर, फेरि अलमलमा परेको हो कि जस्तो लागेको छ । बूढीगण्डकी देशले नै बनाउनेबारे हामीले एउटा मोडल नै दिएका थियौं । पश्चिम सेती थ्री गर्जेजले अघि नबढाएमा सोही क्षेत्रका सरोकारवालाले अग्रसरता लिने भन्नुभएको थियो । तर, अहिले फेरि ५ सय मेवाभन्दा बढी क्षमताका आयोजना लगानी बोर्डतिर गयो । एउटा संस्थाबाट कुनै काम झिकेर अर्कोमा दिन कि त दोस्रो संस्थाले एकदमै अस्वाभाविक काम गरेको हुनुपर्छ । यसले अझै केही वर्ष हामी प्रक्रियामै अलमल हुने देखिन्छ ।
ठूल्ठूला आयोजनाले वातावरणीय जोखीम, महँगो लागत, विद्युत् बजारको अभाव जस्ता विषय उठाइरहन्छन् नि ?
आफ्नो विद्युत् सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिसकेका राष्ट्रहरूले ल्याएका हुन् यस्ता वातावरणीय जोखीमका कुरा । हाम्रो जस्तो गरीब मुलुकले केही जोखीम नउठाए विकास गर्न गाह्रो हुन्छ । हामी ढिलोे भएर लागत महँगो भएको हो । विद्युत् सुरक्षाका लागि विकल्प नभएकोले लागतको तुलना आरओआरसँग गर्नु हुँदैन । आत्मनिर्भर भएपछि हामीलाई विद्युत्का लागि बजार खोज्नुपर्दैन । बरु ठूल्ठूला जलाशययुक्त आयोजना नआउञ्जेलसम्म १/२ वर्षपछि नै हिउँदको अभाव कायम रहनुका साथै वर्षात्को विद्युत् के गर्ने भन्ने चुनौती छ । यो चुनौतीलाई अनन्त कालसम्म लम्ब्याउनु हुन्न ।
विद्युत् उत्पादनको तुलनामा अपेक्षित मात्रामा प्रसारण लाइन बन्न सकिरहेका छैनन् । यसको समाधानका लागि के गर्नु आवश्यक देख्नुभएको छ ?
काम नभएका ठाउँमा अनुगमन जाने त धेरै भयो । केही ठाउँमा अनुगमनका क्रममा दिइएका निर्देशनले काम पनि गरेका छन् । तर समग्र प्रसारण प्रणाली निर्माणका जुनसुकै समस्या पनि हल गर्ने गरी एउटा स्थायी टास्क फोर्स बनाएर परिचालन गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । जस्तै– डीपीआरमा प्रसारण लाइनका लागि ओल्लो रूख काट्ने भनिएको छ । तर, पछि काम गर्दै जाँदा पल्लो काट्नुपर्ने भयो भने त्यसका लागि फेरि स्वीकृतिको प्रक्रियामा जाने नभई तत्काल समाधान हुने काम हुनुपर्छ । प्रभावित स्थानीयलाई सहमतिमा ल्याउन उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।
यो काम त निजी तथा सरकारी दुवै तवरबाट अघि बढाइने जलविद्युत् आयोजनामा पनि आवश्यक छ नि, होइन र ?
हो, आवश्यक छ । वन, जग्गा जस्ता जुनजुन कुरामा रोकावट आएका हुन्छन्, त्यहाँ नियममै भएका कुनै कुरालाई टेकेर रोकेको हुन्छ । अहिले हामीले ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गरेका छौं । सङ्कटकालमा त साधारण नियमहरू खारेज हुन्छन् । सङ्कटकाल भएकाले विद्युत् विकासमा अवरोध गर्ने यो यो नियम खारेज गरिएको छ भन्ने आउनुप¥यो ।